February 2018 – ရွှေလရောင်
သင်ဟာ ဘာနက္ခတ်နဲ့ မွေးသနည်း…
slyadmin February 28, 2018
သင်ဟာ ဘာနက္ခတ်နဲ့ မွေးသနည်း… မိမိတို့၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို (၃) နဲ့စား ၁ ကြွင်းလျှင် နတ်နက္ခတ် ၊ ၂ ကြွင်းလျှင် လူနက္ခတ် ၊ ၀ ကြွင်းလျှင် ဘီလူးနက္ခတ် ဖြစ်သည်။ #နတ်နက္ခတ် ••••••••••••• ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့သည် လူဖြောင့်စိတ်တိုများဖြစ်ကြသည် မိမိသာမှန်ပါစေ ငြိမ်ခံလေ့မရှိဘဲ…
”၄ ရက်အတွင်း အဆီပိုများ ဝုန်းဝုန်း နဲ့ ကျနည်း”
”၄ ရက်အတွင်း အဆီပိုများ ဝုန်းဝုန်း နဲ့ ကျနည်း” လိုအပ်သောပစ္စည်းများ- ဂျင်း ပါးပါးခြစ်ထားပါ (လက်ဖတ်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) သခွါးသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ သံပရာသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ ပူစီနံ အရွတ် (၁၂ ရွတ်) အထက်ပါပစ္စည်းများအားလုံးကို အနည်းဆုံး…
အမည်းစက်ကင်းစင်ပြီး အသားအရေလေး စိုပြေစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ
အမည်းစက်ကင်းစင်ပြီး အသားအရေလေး စိုပြေစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ မင်္ဂလာပါနော်။ မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေ ကင်းစင်ပြီး အသားအရေကို စိုပြေလာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဒီတခါ မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းမို့ စာဖတ်သူတို့ သဘောကျမှာပါနော်။ သံပယိုသီးနဲ့ အာလူး အရင်ဆုံး အာလူးကို ရေသေချာဆေးပြီး ကြိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်သံပယိုရည်…
မိန်းက​​လေးဘဝ.ဆင်​ခြင်​ကြ မိန်းမတို့ ဣ​နြေ္ဒ ​ရွှေ​ပေးမရတဲ့ အဲ့ဒီစကား..​အွန်​လိုင်းတ​ခေတ်​မှာ . ပျက်​ရ​မလိုဖြစ်​​နေပြီ. Fb ​ပေါ်တက်​. အရှက်​မဲ့မဲ့ နူတ်​ထွက်​ကကြမ်းချက်​.. ပရမ်းပတာ ရမ်းခါ​နေတဲ့ ဂယက်​ထချက်​. မပီကလာ ပီကလာ ဆဲနည်းမျိုးစုံနဲ့ ​ဆဲတတ်​မှ.​ ခေတ်​မှီတယ်​ထင်​တဲ့​ခေတ်​. ယိုသူမရှက်​ မြင်​သူရှက်​တဲ့.. ခုများ​တော့အတိုအပြတ်​​တွေဝတ်​. fb ​ပေါ်တက်​.လက်​တည့်​စမ်းကြပါ.လို့. မြူဆွယ်.​​ဖိတ်.​​ခေါ်​နေတဲ့​ခေတ်​.…
သူ ပိုချစ်​​အောင်​လို့….ခြံခုန်တတ်တဲ့နွား၊သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့သူနဲ့…ဘယ်လို ခရီးဆက်မလဲ
သူ ပိုချစ်​​အောင်​လို့….ခြံခုန်တတ်တဲ့နွား၊သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့သူနဲ့…ဘယ်လို ခရီးဆက်မလဲ အချစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ သစ္စာရှိတဲ့သူနဲ့ ဆုံတဲ့သူတွေက ကံကောင်းတဲ့သူတွေလား၊ ဆုတောင်းကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေလား…။ ကျမကတော့ အဲဒီလို မယူဆပါဘူး။ ဘ၀မှာ မိဘ နဲ့ မောင်နှမ သားချင်းဆိုတာကိုသာ ရွေးချယ်လို့မရခဲ့ပေမဲ့၊ သူငယ်ချင်း တို့ချစ်သူ (သို့မဟုတ်) ဘ၀ လက်တွဲဖော်တို့ ဆိုတာာ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။…
ကားဘော်ဒီရုံ အလုပ်သမားဘ၀ကနေ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ မနော
ကားဘော်ဒီရုံ အလုပ်သမားဘ၀ကနေ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ မနော Zawgyi နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်အဖြစ် လက်ခံအားပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ မနောက သူ့ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို ခုလိုဘဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အဆိုတော်မဖြစ်ခင်က ကားဘော်ဒီဆရာအဖြစ် အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူဟာ တံတားဦးအနောက်ဖက်၊ ရွာသစ်ကျွန်းကန်မှာ မွေးတာဆိုတော့ တောနေလူတန်းစားဖြစ်ပြီး ကျောင်းကိုလဲ…
ဆင်းရဲနွမ်းပါးလွန်းလို့ စားသောက်ဆိုင်ထဲတစ်ခါမှဝင်မစားဖူးခဲ့တဲ့သားအမိနှစ်ယောက်ကို ၀မ်းသာမျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသား
slyadmin February 27, 2018
ဆင်းရဲနွမ်းပါးလွန်းလို့ စားသောက်ဆိုင်ထဲတစ်ခါမှဝင်မစားဖူးခဲ့တဲ့သားအမိနှစ်ယောက်ကို ၀မ်းသာမျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလူတိုင်းဟာ နေ့တိုင်းလိုလို Jollibee စားသောက်ဆိုင်မှာစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုစားသောက်ဆိုင်မှာစားတာကပဲသူတို့အတွက်ဇိမ်ခံစရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သားအမိကတော့ဆိုင်အနားကိုယောင်လို့တောင်မသွားနိုင်ပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင် ထဲမှာဝင်စားဖို့အိပ်မက်တောင်မမက်နိုင်တဲ့ဘ၀ပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့သူတို့က စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်စားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Daniel Eugenion ဆိုတဲ့အမျိုသားဟာသူ့ရဲ့ တူလေးနဲ့အတူ Jollibee စားသောက်ဆိုင်မှာရှိနေတုန်း သူက ဆင်းရဲနွမ်းပါးပုံရတဲ့သားအမိနှစ်ယောက်ကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ထိုသားအမိနှစယောက်ကပိုက်ဆံလည်းတစ်ပြားမှမရှိပဲ ဗိုက်ဆာလွန်းကာဆိုင်ထဲဝယ်စားဖို့လည်းပိုက်ဆံမရှိတဲ့အတွက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတ၀ဲလည်လည်လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ Danielက…
ဦးရယ်..​ အခု မီးက ခ​လေး.. ရှိသေးတယ်​ လို့… မန္တလေးမြို့ ရှိ BOF ကေတီဗီဆိုင်တွင် အသက် ၅၀နည်းပါးရှိ ဘောစိလူကြီးတစ်ယောက်သည် အသက်၁၆ နှစ်သာရှိသေးသောကေတီဗီမယ်အား ချစ်ရေးပန်ကာ လက်ထက်ခွင့်တောင်းဆိုသည် ကောင်မလေးမှာအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုကာ “”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက ခလေးရှိသေးတယ်””” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို…
လက်ပံပွင့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကင်ဆာထိတောင်ပျောက်ပါတယ်ပြောတဲ့ ကရင်မကြီး
လက်ပံပွင့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကင်ဆာထိတောင်ပျောက်ပါတယ်ပြောတဲ့ ကရင်မကြီး အညာဒေသများမှာပေါက်လျှက်သော”လက်ပံပွင်’အမျာပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။အညာဒေသအခေါအဝေါအမျိုးမျိုရှိကြပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဒေသများတွင်”လက်ပံပွင်’အနည်းအများအလိုက်ပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ကျမတို့ကရင်ပြည်နယ် ကောကရိတ်မြိုနယ် ကျုံဒိုးမြို့ အမှတ်( ၄ ) ရပ်ကွက် အဘိုအဘွားခေတ်ကဆိုရင် ကျွန်းကလေးများမှာ လက်ပံပွင်အများအပြားကျမတို့အဘိုအဘွားလက်ထက်ကတည်းက ရှိကြပါတယ်။ ယခုကျမတို့လက်ထဲမှာ” လက်ပံပွင်” တစ်ပင်တည်း ပဲရှိပါတောတယ်။လက်ပံပွင်’” ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာ တောရုံတန်ရုံဘယ်သူကများမသိကြပါဘူး။ တချို့ ဒေသများစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်မှန်လည်မသိကြပါဘူး။တစ်ချို့ဒေသများလည်”…
ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ပြီးရင် ရတဲ့ငွေက မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပါပဲပိုလျှံတာမရှိပါဘူး
ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ပြီးရင် ရတဲ့ငွေက မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပါပဲပိုလျှံတာမရှိပါဘူး ကြမ်းကြီး၊ လူမိုက်ကြီး၊ သူခိုး၊ ဓားပြ၊ မတရားစော်ကားတဲ့ မုဒိမ်းကောင် နေရာတွေက သရုပ်ဆောင်ရတော့ အိမ်က မိသားစုဝင် တွေကတော့ ၀မ်းနည်းတာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုလေးတွေဟာ ကျရာဇာတ်ရုပ်အပေါ်မှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ ကျတော်ကို့ကိုနားလည်တယ်ဆိုပေမဲ့ ခုနကလို လူမှု့ရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လေးတွေက စိတ်မချမ်းသာကြဘူး ဟိုတုန်းကဆိုပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှု့က ဒီလောက်မဟုတ်ဖူး မြင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို အရမ်းကိုအော့နှလုံးနာကြတယ်…